စားပှဲထိုးဘဝကနေ ဥရောပဘုရငျအဖွဈသို့… ခြဲလျဆီးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပဲ့ကိုငျရှငျ တူဟယျလျ – Sports A2Z
ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ မတူညီတဲ့အသငျး ၂ သငျးနဲ့ ၂ နှဈဆကျ ခနျြပီယံလိဂျဖိုငျနယျတကျတဲ့ သမိုငျးတလြှောကျ ပထမဆုံးနညျးပွအဖွဈ မျောကှနျးထိုးပွီး ခနျြပီယံလိဂျခနျြပီယံဖွဈလာခဲ့တဲ့ ဂြာမနျသားကွီးသောမတျဈ တူဟယျလျရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးကို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ အတျောလေးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနသေလို သူ့ကို ၁၉၇၃ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၂၉ ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့လို့ အသကျ ၄၈ နှဈအရှယျမှာ ဘဝရဲ့အမွငျ့မားဆုံး အခြိနျအခါကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီလို့ ဆိုရပါမယျ။
သူ့ဖခငျဖွဈသူက ပငျစငျယူထားတဲ့ ဘောလုံးနညျးပွကွီးတဦးဖွဈနခွေငျးကပဲ တူဟယျလျရဲ့ ဘောလုံးဝါသနာမြိုးစကေို့ အမှရေခဲ့ခွငျးရဲ့ အစဖွဈခဲ့ပွီး ဘောလုံးနဲ့ပတျသကျရငျ သူ့ရဲ့လကျဦးဆရာကလညျး ဖခငျကိုယျတိုငျပါ။ အနောကျဂြာမနီက ဇာတိမွေ စိုကျပြိုးရေးမွို့ကလေး ခရှမျးဘကျချြမှာ ဘောလုံးကနျတတျအောငျ သငျကွားခွငျးခံခဲ့ရတယျ။
ဘောလုံးကစားရတဲ့ အရသာကို ငယျစဉျကတညျးက မကျမောသှားခဲ့တဲ့ တူဟယျလျဟာ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဘောလုံးသမားဖွဈလာဖို့ ပိုငျးဖွတျခဲ့ပွီး ဖခငျဖွဈသူအလုပျလုပျခဲ့တဲ့ ခရှမျးဘကျချြအသငျးမှာပဲ ဝငျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး ပြျောရှငျခဲ့ဖူးတဲ့သူက ပညာရေးကို တျောရိလြျောရိအနအေထားနဲ့ ဘောလုံးလောကထဲ ခွစေုံပဈဝငျခဲ့တယျ။
၁၉၈၈ မှာ အော့ဈဘတျရဲ့ လူငယျအကယျဒမီကို အရှေးခံလိုကျရတယျ။ ၁၉၉၂ အထိ စီနီယာပှဲထှကျခှငျ့ မရခဲ့သလို ဘှဲ့ရခဲ့တဲ့ အဲဒီ ၁၉ နှဈသားအရှယျမှာပဲ အကယျဒမီကနေ စှနျ့ပဈခဲ့လိုကျရတယျ။ စတုဂါတာ ကဈကာဈအသငျးဆီရောကျပွီး ၉၃-၉၄ တရာသီအပွီးမှာ ခွစှေမျးမပွနိုငျလို့ ထပျကနျထုတျခံရတယျ။
လကျလြှော့လမေ့ရှိတဲ့ တူဟယျလျက SSV အားလျမျအသငျးနဲ့ လူရှေးခံရတယျ။ အသငျးနဲ့ ၄ နှဈကွာ ခွစှေမျးပွကစားနခြေိနျ ဒူးအရှတျဒဏျရာရပွီး အသကျ ၂၅ သားမှာပဲ ကစားသမားဘဝအိပျမကျ အဆုံးသတျခဲ့ရတယျ။
ရိုကျခြိုးခံရတဲ့ အိပျမကျဟာ တူဟယျလျကိုတော့ အဆုံးမသတျနိုငျခဲ့ဘဲ ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၀၊ ၂ နှဈအတှငျးမှာ စီးပှားရေးနဲ့ ဘောလုံးနညျးပွ ပညာရေးကို သငျကွားနတေဲ့တပွိုငျနကျမှာ ဘားတခုမှာ စားပှဲထိုးဝငျလုပျရငျး ဘဝကို ကြောငျးခဲ့တယျ။
၂၀၀၀ ခုနှဈအလှနျမှာတော့ ဂြာမနျကလပျ စတုဂတျအသငျးမှာ လူငယျပြိုးထောငျရေးနညျးပွရာထူးကို ရခဲ့တယျ။ မာရီယို ဂေါ့ဇီနဲ့ ရီးရဲလျကစားသမားဟောငျး ဆမျမီ ခီဒီရာတို့ကို မှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့တယျ။ ခါးသီးစှာ ကနျထုတျခံခဲ့ရတဲ့ Augsburg ကို ၂၀၀၅ မှာ ပွနျသှားပွီး ဖခငျရဲ့လမျးကွောငျးကိုနငျးကာ ဘောလုံးလကေ့ငျြ့ရေးဆရာအဖွဈ လုပျကိုငျခဲ့တယျ။
လူငယျနညျးပွအဖွဈ ၃ နှဈလုပျကိုငျခဲ့တဲ့နောကျ အသငျးကွီးနညျးပွအဖွဈ ကမျးလှမျးခဲ့ရပွီး တနှဈတာ တာဝနျယူခဲ့ရာမှာ ဘှနျဒကျလီဂါကို တနျးတကျလာတဲ့ မိုငျ့ဇျအသငျးရဲ့ ချေါယူခွငျးခံခဲ့ရတယျ။ တူဟယျလျရဲ့လမျးတှေ ပှငျ့သှားခဲ့တယျ။ လူနညျးနညျးနဲ့ ကြဲကြဲဝိုငျးရတဲ့ မိုငျ့ဇျလိုအသငျးနဲ့ ရာသီအဖှငျ့ပှဲမှာပဲ ဘိုငျယနျလို ဘီလူးကွီးကို ဖွိုခခြဲ့တယျ။ မိုငျ့ဇျအသငျးသမိုငျးမှာ အမွငျ့ဆုံးမှတျတမျးအဖွဈ ဘှနျဒကျလီဂါ အဆငျ့ ၅ နဲ့ ဇာတျသိမျးလှခဲ့တယျ။
ဒေါ့မနျရဲ့ နားတှဆေီ ပေါကျသှားခဲ့တဲ့ တူဟယျလျရဲ့အစှမျးအစက ယာဂငျ ကလော့ပျနရောကို ဆကျခံဖို့ ဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဒေါ့မနျနဲ့ ဂြာမနျပိုကယျဖလားကို သိမျးပိုကျနခြေိနျမှာ အူစမနျ ဒမျဘီလီနဲ့ ခရဈရှနျ ပူလီရှဈချြတို့လို ကွယျပှငျ့တှကေို တောကျပစခေဲ့တယျ။ ဘုနျးတနျခိုးထှားနတေဲ့ PSG ရဲ့ စငျတျောကောကျခွငျးကို ခံခဲ့ရတယျ။
စားပှဲထိုးဘဝကနေ ပထမဆုံးနညျးပွအလုပျရပွီး ၉ နှဈအကွာမှာတော့ တူဟယျလျဟာ PSG ကို ရောကျရောကျခငျြး ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီမှာပဲ ပွငျသဈလီဂူးခနျြပီယံဖွဈကာ နောကျရာသီမှာတော့ ပွညျတှငျးဖလား ၃ လုံးခနျြပီယံဖွဈပွီး ရနေံငှထေုပျအသငျးကွီးကို ခနျြပီယံလိဂျဖိုငျနယျညဆီ ပို့ဆောငျပေးနိုငျခဲ့တယျ။
ပပျဂှာဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီးလိုအသငျးကို ခမြှေုနျးပွီး ခယျြလျဆီးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျအောငျမွငျမှုက သူ့ရဲ့ အမွငျ့ဆုံးအခြိနျအခါဖွဈခဲ့ပွီး ဖရနျ့ လမျးပတျလကျထဲက အဆငျ့ ၉ အသငျးကို လှဲပွောငျးရယူပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ အဆငျ့ ၄ အသငျးဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျပွခဲ့တယျ။
၇ ခါလဲကရြငျ ၈ ခါပွနျထတဲ့ တူဟယျလျရဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေး
တူဟယျလျလိုလူမြိုးက တခုခုကို စှဲစှဲမွဲမွဲလုပျတတျသူဖွဈပွီး သူ့အောငျမွငျမှုမှာ ဒါက အဓိကခြဲ့တယျ။ ဂြာမနျပိုကယျဖလားဖိုငျနယျမှာ ရှူံးတဲ့ ဒေါ့မနျနဲ့ နောကျနှဈမှာ ဖိုငျနယျပွနျတကျပွီး ခနျြပီယံဖွဈတယျ။ PSG နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖိုငျနယျမှာရှူံးပွီး နောကျနှဈမှာ ခယျြလျဆီးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျခနျြပီယံဖွဈလာတယျ။ ဒါတှကေ အားကောငျးတဲ့သကျသဖွေဈပွီး သူက အရာရာကို နညျးစနဈတကလြုပျတတျသူဖွဈပွီး အသေးအဖှဲကအစ အကိုငျအတှယျကောငျးသူဖွဈတယျ။
တူဟယျလျရဲ့ တကယျ့စိတျကူးက ဘာလဲ? လူ့အသကျတှကေို ကယျဆယျခငျြတဲ့ တူဟယျလျ
ဘောလုံးလောကမှာ မအောငျမွငျရငျ တူဟယျလျဘာလုပျမလဲဆိုတဲ့ စိတျကူးက ငယျဘဝတညျးက ရှိခဲ့တာပါ။ ဘောလုံးကစားရတာကို ခုံမငျလှနျးတဲ့ အဲဒီအခြိနျက ၉ နှဈသားလေးဟာ ဟယျလီကျောပတာကို မောငျးနှငျခငျြခဲ့တာပါ။ လယောဥျမှူးဘဝနဲ့ လူ့အသကျတှကေို ကယျဆယျရေးလုပျခငျြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စိတျကူးက အတျောလေးလညျးလှပခဲ့ပါတယျ။
ဆီဆီ တူဟယျလျနဲ့ အိမျထောငျရေးဘဝ
အောငျမွငျတဲ့နညျးပွတိုငျးရဲ့နောကျကှယျမှာ ပါရမီဖွညျ့ဘကျစဈစဈတယောကျက ရှိနတောဟာ တူဟယျလျက ထပျမံသကျသပွေခဲ့တယျ။ သူတို့စုံတှဲက တူဟယျလျရဲ့ မိနျ့ဇျနညျးပွဘဝ ၂၀၀၉ မှာ မင်ျဂလာဆောငျခဲ့တာဖွဈပွီး အမျမာနဲ့ ကငျမျဆိုတဲ့ သမီးလေးနှဈဦးကို ဆညျးလညျးလေးအဖွဈ ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ တူဟယျလျရဲ့နောကျကှယျမှာ ဒီမိသားစုက တကယျ့အထောကျအပံ့ဖွဈစခေဲ့တာပါ။
တူဟယျလျရဲ့ဖိနပျကို ဘာကွောငျ့ ထူးဆနျးစှာ ဝိုငျးဝနျးနမျးရှုံ့ခဲ့ကွသလဲ? (သို့) အစှဲတှကေို ယုံကွညျတတျတဲ့ အယူသီးသူလား
ခနျြပီယံလိဂျအောငျပှဲအပွီးမှာ ဂိုးသမားမနျဒီ၊ ဂရြူး၊ ရူဒီဂါနဲ့ ကတျဇူးမားတို့ဟာ တူဟယျလျရဲ့ ရှုးဖိနပျကို ထူးဆနျးစှာ ဝိုငျးနမျးခဲ့ကွတာပါ။ အဝတျလဲခနျးထဲမှာလညျး တူဟယျလျဟာ ဒီဖိနပျကို ဆုဖလားတခုကို မွှောကျပွီး အောငျပှဲခံခဲ့ပါတယျ။
ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ တူဟယျလျက “ဒီဖိနပျကို ကြှနျတျော ပါရီက ရတာပါ။ ပီအကျဈဂြီဥက်ကဌက လကျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ ပီအကျဈဂြီရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖိုငျနယျပှဲမှာ ဒီဖိနပျကို စီးမယျလို့ ကြှနျတျော ကတိပေးခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ပှဲနမှေ့ာ မစီးဖွဈဘဲ မသှေ့ားခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘိုငျယနျမွူးနဈကို ရှူံးခဲ့တယျ။ အခုညမှာတော့ ဒီဖိနပျကို ကြှနျတျော မမမေ့လြော့စီးခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ နိုငျခဲ့တယျ”လို့ သူ့ရဲ့အယူသီးမှုတခုအကွောငျးကိုလညျး ရှငျးပွသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
ZAWGYI: ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ မတူညီတဲ့အသင်း ၂ သင်းနဲ့ ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်တက်တဲ့ သမိုင်းတလျှောက် ပထမဆုံးနည်းပြအဖြစ် မော်ကွန်းထိုးပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဂျာမန်သားကြီးသောမတ်စ် တူဟယ်လ်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေသလို သူ့ကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့လို့ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်မှာ ဘဝရဲ့အမြင့်မားဆုံး အချိန်အခါကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလို့ ဆိုရပါမယ်။
သူ့ဖခင်ဖြစ်သူက ပင်စင်ယူထားတဲ့ ဘောလုံးနည်းပြကြီးတဦးဖြစ်နေခြင်းကပဲ တူဟယ်လ်ရဲ့ ဘောလုံးဝါသနာမျိုးစေ့ကို အမွေရခဲ့ခြင်းရဲ့ အစဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင် သူ့ရဲ့လက်ဦးဆရာကလည်း ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပါ။ အနောက်ဂျာမနီက ဇာတိမြေ စိုက်ပျိုးရေးမြို့ကလေး ခရွမ်းဘက်ခ်ျမှာ ဘောလုံးကန်တတ်အောင် သင်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။
ဘောလုံးကစားရတဲ့ အရသာကို ငယ်စဉ်ကတည်းက မက်မောသွားခဲ့တဲ့ တူဟယ်လ်ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့ ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ခရွမ်းဘက်ခ်ျအသင်းမှာပဲ ဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူက ပညာရေးကို တော်ရိလျော်ရိအနေအထားနဲ့ ဘောလုံးလောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တယ်။
၁၉၈၈ မှာ အော့စ်ဘတ်ရဲ့ လူငယ်အကယ်ဒမီကို အရွေးခံလိုက်ရတယ်။ ၁၉၉၂ အထိ စီနီယာပွဲထွက်ခွင့် မရခဲ့သလို ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ အဲဒီ ၁၉ နှစ်သားအရွယ်မှာပဲ အကယ်ဒမီကနေ စွန့်ပစ်ခဲ့လိုက်ရတယ်။ စတုဂါတာ ကစ်ကာစ်အသင်းဆီရောက်ပြီး ၉၃-၉၄ တရာသီအပြီးမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ ထပ်ကန်ထုတ်ခံရတယ်။
လက်လျှော့လေ့မရှိတဲ့ တူဟယ်လ်က SSV အားလ်မ်အသင်းနဲ့ လူရွေးခံရတယ်။ အသင်းနဲ့ ၄ နှစ်ကြာ ခြေစွမ်းပြကစားနေချိန် ဒူးအရွတ်ဒဏ်ရာရပြီး အသက် ၂၅ သားမှာပဲ ကစားသမားဘဝအိပ်မက် အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။
ရိုက်ချိုးခံရတဲ့ အိပ်မက်ဟာ တူဟယ်လ်ကိုတော့ အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ဘဲ ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၀၊ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ စီးပွားရေးနဲ့ ဘောလုံးနည်းပြ ပညာရေးကို သင်ကြားနေတဲ့တပြိုင်နက်မှာ ဘားတခုမှာ စားပွဲထိုးဝင်လုပ်ရင်း ဘဝကို ကျောင်းခဲ့တယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်အလွန်မှာတော့ ဂျာမန်ကလပ် စတုဂတ်အသင်းမှာ လူငယ်ပျိုးထောင်ရေးနည်းပြရာထူးကို ရခဲ့တယ်။ မာရီယို ဂေါ့ဇီနဲ့ ရီးရဲလ်ကစားသမားဟောင်း ဆမ်မီ ခီဒီရာတို့ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ခါးသီးစွာ ကန်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Augsburg ကို ၂၀၀၅ မှာ ပြန်သွားပြီး ဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုနင်းကာ ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
လူငယ်နည်းပြအဖြစ် ၃ နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့နောက် အသင်းကြီးနည်းပြအဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ရပြီး တနှစ်တာ တာဝန်ယူခဲ့ရာမှာ ဘွန်ဒက်လီဂါကို တန်းတက်လာတဲ့ မိုင့်ဇ်အသင်းရဲ့ ခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ တူဟယ်လ်ရဲ့လမ်းတွေ ပွင့်သွားခဲ့တယ်။ လူနည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲဝိုင်းရတဲ့ မိုင့်ဇ်လိုအသင်းနဲ့ ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာပဲ ဘိုင်ယန်လို ဘီလူးကြီးကို ဖြိုချခဲ့တယ်။ မိုင့်ဇ်အသင်းသမိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းအဖြစ် ဘွန်ဒက်လီဂါ အဆင့် ၅ နဲ့ ဇာတ်သိမ်းလှခဲ့တယ်။
ဒေါ့မန်ရဲ့ နားတွေဆီ ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ တူဟယ်လ်ရဲ့အစွမ်းအစက ယာဂင် ကလော့ပ်နေရာကို ဆက်ခံဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒေါ့မန်နဲ့ ဂျာမန်ပိုကယ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်နေချိန်မှာ အူစမန် ဒမ်ဘီလီနဲ့ ခရစ်ရှန် ပူလီရှစ်ခ်ျတို့လို ကြယ်ပွင့်တွေကို တောက်ပစေခဲ့တယ်။ ဘုန်းတန်ခိုးထွားနေတဲ့ PSG ရဲ့ စင်တော်ကောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်။
စားပွဲထိုးဘဝကနေ ပထမဆုံးနည်းပြအလုပ်ရပြီး ၉ နှစ်အကြာမှာတော့ တူဟယ်လ်ဟာ PSG ကို ရောက်ရောက်ချင်း ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီမှာပဲ ပြင်သစ်လီဂူးချန်ပီယံဖြစ်ကာ နောက်ရာသီမှာတော့ ပြည်တွင်းဖလား ၃ လုံးချန်ပီယံဖြစ်ပြီး ရေနံငွေထုပ်အသင်းကြီးကို ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ညဆီ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ပပ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးလိုအသင်းကို ချေမှုန်းပြီး ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှုက သူ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖရန့် လမ်းပတ်လက်ထဲက အဆင့် ၉ အသင်းကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့် ၄ အသင်းဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တယ်။
၇ ခါလဲကျရင် ၈ ခါပြန်ထတဲ့ တူဟယ်လ်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
တူဟယ်လ်လိုလူမျိုးက တခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တတ်သူဖြစ်ပြီး သူ့အောင်မြင်မှုမှာ ဒါက အဓိကျခဲ့တယ်။ ဂျာမန်ပိုကယ်ဖလားဖိုင်နယ်မှာ ရှူံးတဲ့ ဒေါ့မန်နဲ့ နောက်နှစ်မှာ ဖိုင်နယ်ပြန်တက်ပြီး ချန်ပီယံဖြစ်တယ်။ PSG နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာရှူံးပြီး နောက်နှစ်မှာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေက အားကောင်းတဲ့သက်သေဖြစ်ပြီး သူက အရာရာကို နည်းစနစ်တကျလုပ်တတ်သူဖြစ်ပြီး အသေးအဖွဲကအစ အကိုင်အတွယ်ကောင်းသူဖြစ်တယ်။
တူဟယ်လ်ရဲ့ တကယ့်စိတ်ကူးက ဘာလဲ? လူ့အသက်တွေကို ကယ်ဆယ်ချင်တဲ့ တူဟယ်လ်
ဘောလုံးလောကမှာ မအောင်မြင်ရင် တူဟယ်လ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးက ငယ်ဘဝတည်းက ရှိခဲ့တာပါ။ ဘောလုံးကစားရတာကို ခုံမင်လွန်းတဲ့ အဲဒီအချိန်က ၉ နှစ်သားလေးဟာ ဟယ်လီကော်ပတာကို မောင်းနှင်ချင်ခဲ့တာပါ။ လေယာဉ်မှူးဘဝနဲ့ လူ့အသက်တွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးက အတော်လေးလည်းလှပခဲ့ပါတယ်။
ဆီဆီ တူဟယ်လ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ
အောင်မြင်တဲ့နည်းပြတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ပါရမီဖြည့်ဘက်စစ်စစ်တယောက်က ရှိနေတာဟာ တူဟယ်လ်က ထပ်မံသက်သေပြခဲ့တယ်။ သူတို့စုံတွဲက တူဟယ်လ်ရဲ့ မိန့်ဇ်နည်းပြဘဝ ၂၀၀၉ မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမ်မာနဲ့ ကင်မ်ဆိုတဲ့ သမီးလေးနှစ်ဦးကို ဆည်းလည်းလေးအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ တူဟယ်လ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဒီမိသားစုက တကယ့်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။
တူဟယ်လ်ရဲ့ဖိနပ်ကို ဘာကြောင့် ထူးဆန်းစွာ ဝိုင်းဝန်းနမ်းရှုံ့ခဲ့ကြသလဲ? (သို့) အစွဲတွေကို ယုံကြည်တတ်တဲ့ အယူသီးသူလား
ချန်ပီယံလိဂ်အောင်ပွဲအပြီးမှာ ဂိုးသမားမန်ဒီ၊ ဂျရူး၊ ရူဒီဂါနဲ့ ကတ်ဇူးမားတို့ဟာ တူဟယ်လ်ရဲ့ ရှုးဖိနပ်ကို ထူးဆန်းစွာ ဝိုင်းနမ်းခဲ့ကြတာပါ။ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာလည်း တူဟယ်လ်ဟာ ဒီဖိနပ်ကို ဆုဖလားတခုကို မြှောက်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ တူဟယ်လ်က “ဒီဖိနပ်ကို ကျွန်တော် ပါရီက ရတာပါ။ ပီအက်စ်ဂျီဥက္ကဌက လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ ဒီဖိနပ်ကို စီးမယ်လို့ ကျွန်တော် ကတိပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲနေ့မှာ မစီးဖြစ်ဘဲ မေ့သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ရှူံးခဲ့တယ်။ အခုညမှာတော့ ဒီဖိနပ်ကို ကျွန်တော် မမေ့မလျော့စီးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ခဲ့တယ်”လို့ သူ့ရဲ့အယူသီးမှုတခုအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြသွားခဲ့ပါသေးတယ်။